Wararkii ugu dambeeyay ee daawashada kuwa ugu quruxda badan, ugufiican, saacadaha ugu cusub! • Saacadaha Qaboojinta 2019 | Hablahaaga maalinlaha ah dhiirrigelinta!
Tilmaamaha & Iibsiga Tilmaamaha
Furan Macaamiisha Mobile-ka
Hablahaaga maalinlaha ah dhiirrigelinta!
Wararkii ugu dambeeyay ee daawashada oo leh saacadihii ugu quruxda badnaa, ugu fiicnaa uguna cuslaa.
Seiko wuxuu ku dhawaaqay Prospex The Black Series Limited Edition
Daabacaad kooban oo xadidan oo ah saacadaha daawada ayaa ka socda Seiko. Ilaalinno gaar ah oo loogu talagalay kuwa wax u adeegsa si kor loogu qaado illaa saacadaha madow ee qoto dheer waqtiyada oo dhan. Waa la heli karaa oo ku xaddidan 7000 gogo '.
Soo bandhigida Hublot spirit Of Big Bang Meca-10
Dad badan oo ka socda Hublot inta badan way yaqaanaan daawashada caanka ah ee Big Bang. Isku soo ururinta Ruuxa Big Bang, Hublot wuxuu hadda la imanayaa daabacaad cusub, oo leh hagaajinno kala duwan si looga dhigo MECA-10 caliber oo leh kayd awood 10-maalmood ah oo ku habboon. Qiimaha laga bilaabo € 22.700
Kuwani waxay ahaayeen 3-da saacadood ee ugu qaalisan iibinta eBay sanadka 2019
Liiska 20ka sare ee eBay waxyaabaha ugu qaalisan ee la iibiyay 2019 waa 3 saacadood oo gaar ah. Astaamaha saacadaha ee Rolex, Richard Mille iyo Patek Philippe si wanaagsan ayey wax u socdaan, sidoo kale goobtan xaraashka ee caan ka ah.
Swatch wuxuu soo bandhigayaa saacadda Big Bold Jellyfish
Waqtiga la awoodi karo, ee Swatch Classical cad ee 80s ayaa soo laabtay oo ka weyn sidii hore. Kiisku wuxuu leeyahay dhexroor ah 47mm, taajkuna wuxuu taagan yahay 2-ka saac. Waxaa laga heli karaa dhammaan dukaannada Swatch, qiimahoodu waa € 95 yuuro.
Daawashada cusub ee dheeman-ka-dheemanka ka ah Cristiano Ronaldo ayaa ah tan ugu qaalisan Rolex abid soo saaray
Damaashaadka & Damaashaadka
Markii ugu dambeysay, xiddigii hore ee kubada cagta Cristaino Ronaldo ayaa kaxeystay inuu xirto maaliyad uu leeyahay waardiyahaan sharafta leh ee reer Switzerland. Tani waxay u muuqataa inay tahay saacad dhow 500.000 euro.
Mudanayaal ugu kulul ayaa la heli karaa sanadka 2019
Xulasho cajiib ah, saacado qurux badan ee Mudanayaal. Laga soo bilaabo Richard macaan macaan ilaa marwadaha Rolex ladabeeya ee waqtiga ilaaliya.
Taariikh & Taariikh, Wararka
Montblanc daawo sheeko gaar ah. Waqtiga waxqabadka Minerva waxaa loo arkay inuu sifiican ilaaliyo. Ku xaddidan 38 gogo ' Qiimaha € 18.200.
Afar saac oo dhammaystiran oo dhammaystiraya midabada ciidda masiixiga
Diyaar ma u tahay Ciid Kirismas iyo sanadka cusub ee 2020? Xulashadaan 4 saac waxaad kuheli doontaa jawiga. Ciidaha farxadda leh!
Kaliya wax ka gariir: daawashada cusub ee loo yaqaan 'Breitling watch Aviator' 8 B01 Chronograph 43 Mosquito
Duuliyaha cusub 8 B01 Chronograph 43 Mosquito. Bukaan-socodkaan 'Breitling watch' wuxuu ku jihaysan yahay faahfaahintiisa quruxda badan, gaar ahaan garaacitaanka. Waa saacad qaali ah oo qurux badan oo duulimaadyo diyaaradeed. Qiimaha qiyaastii € 7.500.
Wada shaqeynta Hamilton: Khaki Pilot Schott NYC Limited Edition pilot watch waxay leedahay asal militari iyo qaab
Wadashaqeynta gaar ahaan guusha leh ee udhaxeysa shirkadda caanka ah ee caanka ah ee Hamilton iyo Schott NYC. Waxaa la asaasay isla sanadkaas, labadaba alaab-qeybiyaha Ciidanka Cirka, iyo kuwo kale. Daawashada tijaabada ah ee quruxda badan ee daabacan xaddidan. Waxaa laga heli karaa +/- € 1.145 euro.
bảng vinh danh op Richard Mille daawashada iyadoo lala kaashanayo Pharell Williams ayaa macno ahaan u jeedsan riyadiisa
Iyada oo la Ilaaliyo Cool Watures waxaan kula socodsiinaynaa wararkii ugu xiisaha badnaa ee taariikhda, asal ahaan, saacadaha ugu quruxda badan, waqtiyada caanka ah, talooyinka saacadaha iyo horumarka cusub ee adduunka!
- ilaa 1000 EURO 10.000 - 20.000 EURO 20.000 - 50.000 EURO 100.000 EURO ama ka badan 1000 - 2500 EURO 2500 - 5000 EURO 5000 - 10.000 EURO Mareykan ah Audemars Piguet Toos otomaatig ah Saacadaha la awoodi karo Breitling Casio celebrity Chronograph Tilmaanta maalinta Mudanayaal ayaa ilaaliya Daawashada Daawashada Saacadaha xaddidan taariikhda Ragga ilaalintiisa Hublot Talyaani IWC Schaffhausen Jabaaniyaan Iibsashada iibsiga Xarkaha dharka maqaarka Motorsport watch omega Dulmar guud Panerai Patek Philippe Duuliyaasha dayuuradaha Kaydka Awoodda Quartz Richard Mille Rolex Xarkaha dharka fiiqista leh Seiko qalfoofka Smartwatch Ilaalin isboorti Qalabka saacadaha birta tag Heuer Waqtiga Switzerland
Ku saabsan Cool Watches.eu
Booqo Daawooyinka Qaboojinta maalin walba si aad u hesho wararkii ugu dambeeyay, talooyin iyo sawirro wargeys ah!
Saacado caan ah oo la yaqaan
Daawashada Casio-ga cusub: hordhaca "G-Shock" Qalliinka buuxa "Camouflage
Maxay Rolex Sky-Dweller 326933 u tahay maalgashiga ugu fiican xilligan
Hublot Big Bang Scuderia Ferrari 90th Sannad guurada